पुराना चाडपर्व र कम्युनिस्ट : अनिल शर्मा – eratokhabar
ई-रातो खबर २०७३, २१ असोज शुक्रबार १७:४३ July 19, 2017 1139 Views
अनिल शर्मा पोलिट व्यूरो सदस्य केन्द्रीय प्रकाशन विभाग इन्चार्ज नेकपा (माओवादी)
२०७३ सालको गुरुपूर्णिमा, तीज अथवा हरितालिका, जितिया, इदलगायतका चाडपर्वहरू भर्खरैभर्खरै बिदा भएका छन् एक वर्षका लागि । गएका चाडपर्वले भन्दा बढी नेपाली समाजलाई प्रभावित पार्ने दसैँ, तिहार, छठलगायत चाडपर्वले नेपाली समाजलाई प्रभावित पारिसकेको छ । हरेक वर्ष सामान्ती आडम्बर, पुँजीवादी रबाफ र बजारको उपभोक्तावादी विकृति पनि थपिँदै गएको छ । चाडबाड संस्कृतिको एउटा अङ्ग हो । चाडबाड वा संस्कृति भन्नाले नाचगान भोजभतेर, रसरङ आदिलाई मात्र बुझ्ने गरिएको छ ।
तर यसको परिभाषा व्यापक र गहन छ । संस्कृतिकर्मी, चिन्तक मेक्सिम गोर्कीले ‘मानवद्वारा निर्मित दोस्रो प्रकृति नै संस्कृति हो’ भनेका छन् । त्यसको अर्थ प्राकृतिक वस्तुमा श्रम मिसाएपछि बन्ने वा उत्पादन हुने अर्को प्रकृति वा प्राकृतिक वस्तु संस्कृति हो । जस्तै ः जङ्गलको सखुवाको रूख प्रकृति हो त्यसलाई फर्निचर उद्योगमा ल्याएर खाट, दराज, कुर्ची बनाएपछि ती पनि प्राकृतिक वस्तु नै रहन्छन् । तर जङ्गली काठमा विशुद्ध प्रकृतिको भूमिका हुन्छ भने फर्निचरमा श्रम जोडिएर नयाँ प्राकृतिक अस्तित्व उत्पन्न हुन जान्छ । यसलाई सौन्दर्यचिन्तक गोर्कीले ‘दोस्रो प्रकृति’ भनेका छन् । संस्कृति मूलतः दुई प्रकारका हुन्छन्– भौतिक संस्कृति र आत्मिक संस्कृति ।
पाँच ज्ञानेन्द्रियद्वारा बोध गर्न सकिने संस्कृतिलाई भौतिक संस्कृति भनिन्छ भने कुनै न कुनै रूपमा अस्तित्वमा रहने, बोधगम्य हुने, नाप, तौल, आकार नहुने अथवा ज्ञानेन्द्रियद्वारा बोध गर्न नसकिने संस्कृतिमा घर, फूलबारी, मन्दिर, बाजा, पोसाक आदि भौतिक वस्तु अथवा अस्तित्व पर्छन् । त्यसैगरी भावना, विचार, दुःख, पीडा, आदरभाव आदि आत्मिक संस्कृतिमा पर्छन् । यसरी संस्कृति दुई प्रकारका हुन्छन् । तर एउटाले अर्कोलाई निर्धारित वा नियन्त्रित गरिरहन्छन् । क्रान्तिकारी विचार वा संस्कृति भएको मान्छे वा समाजले परिवर्तनलाई समर्थन गर्छ ।
श्रम र श्रमिकलाई माया वा सम्मान गर्छ । परिवर्तनलाई सहयोग गर्छ । पश्चगामी संस्कृति भएको व्यक्तिले ठूलाको चाकडी गर्छ । सानालाई हेप्छ । आफ्नो कर्म वा अरूले बिगारेको कामलाई पनि ‘ललाटमा यस्तै लेखेको रहेछ’ भन्दै बस्छ । महलमा बस्ने र झुपडीमा बस्नेको, धनी र गरिबको सोच्ने, बोल्ने र व्यवहार गर्ने तरिका (संस्कृति) पनि फरक हुन्छ । धनी र गरिब व्यक्ति, सम्पन्न र विपन्न समाज, विकसित र अविकसित देशको खानपान, भेषभूषा, व्यवहार र सोचाइ फरक हुनुको कारण त्यही हो । संस्कृति कसैको लहड वा सनकमा अनाहक जन्मिएका हुँदैनन् । यद्यपि वर्गसमाजमा शासक वर्गले आफ्नो स्वार्थअनुसार बदलेको अथवा परिस्कार गरेको हुन्छ । निश्चित युगका भौतिक आवश्यकता पूर्ति गर्नका लागि कुनै पनि संस्कृतिको उदय भएको हुन्छ ।
मान्छेको ज्ञान चेतनाको सीमाका कारण जन्मकालमै त्यसमा अवैज्ञानिक र जनविरोधी पक्षहरू समावेश हुनसक्छन् । जसरी मान्छे जन्मँदा नै कुनै
रोगसहित जन्मेको हुनसक्छ । कतिपय संस्कृति परिवर्तित समयअनुसार बोझिलो वा अनुपयुक्त भएका हुन्छन् । त्यसप्रकारका संस्कृतिलाई समाजले सुधार गर्दै आएको पनि छ । जस्तै, हिन्दु समाजमा सुरुमा १२ वर्ष बरखी बार्ने प्रचलन थियो । जुन बेला मान्छेहरू टाढाटाढा बस्थे । खोला, नदी तर्न र खबर cपु¥याउन बर्खा कटाउनुपथ्र्यो, हिउँ पग्लनु पथ्र्यो । डुङ्गाको विकाससँगै १३ महिनामा झ¥यो । अहिले १३ दिन पनि लामो भएको छ । तर आफ्ना पुर्खालाई सम्झनु, तिनको सम्मान गर्नु त राम्रो पक्ष हो । यस्तै संस्कृतिले मान्छेलाई पशुजगत्बाट अलग गरेको छ । त्यसैले त्यसप्रकारका संस्कृतिलाई सुधार गरेर वा विकल्प स्थापित गर्ने लामो प्रक्रियाबाट गुज्रनुपर्छ ।
कतिपय जनविरोधी, लुटेरा मनोवृत्तिले निर्माण गरिएका संस्कृति पनि छन् । जस्तै ः हिन्दु धर्ममा गुरुड पुराण संस्कृति निश्चित समुदायद्वारा आफ्नो हितमा लादेको कारण त्यसलाई खारेज गर्नुपर्छ । तर हरेक दिन बिहान नुहाउने, धूप बाल्ने, भान्छामा जुत्ता नलग्ने, गुरु र मातापिताको आदर गर्ने, बटुवालाई बास दिने, शरणको मरण नगर्ने संस्कृति आज पनि उत्तिकै आवश्यक छन् । पुराना संस्कृति भन्नासाथ सबै खराब हुँदैनन् । त्यो कच्चा ज्ञानको उपज मात्र हो । त्यसैले निरन्तरता दिनुपर्ने, सुधार गर्नुपर्ने र खारेज गर्नुपर्ने तीनथरीका संस्कृति हुन्छन् ।
पुराना वा परम्परादेखि चल्दै आएका चाडबाडका विषयमा पनि त्यस कोणबाट हेरेर मात्र व्यवहार गर्नुपर्छ । अन्यथा ‘अल्पज्ञानम् भयंकरम्’ अथवा छिपछिपे ज्ञान अज्ञानभन्दा पनि डरलाग्दो हुन्छ भनेझैँ हुन्छ । पुराना चाडहरू निश्चित समयक भौतिक आवश्यकताअनुसार बनेका थिए । ठूलालाई आदर गर्न, छरिएका आफन्त भेटघाट गर्न, रमाइलो वा रसरङ गर्न, अलौकिक शक्तिप्रति श्रद्धा गर्न अनेक कारणले चाडबाड, आचरण तथा संस्कृतिको उदय भएको थियो । हिजो चन्द्रमा पुजिन्थ्यो । अब त्यहाँ मान्छेले ‘दिसापिसाब गरेर आइसक्यो । चन्द्रमा वा जून हाम्रो पृथ्वीजस्तै भौतिक डल्लो भएकाले किन पूजा गरिरहनु ? वायुयानको विकासले तीनचार दिनमा हरेक गोलाद्र्धको मान्छे कुनै पनि स्थानमा जम्मा हुनसक्छ । अब १३ दिन मृत्यु संस्कार आवश्यक छैन । आजको जटिल र प्रतिस्पर्धात्मक समाजमा आधा महिना पेसा, व्यवसाय बन्द गरेर बस्न हुलाक सेवाका कर्मचारीबाहेक अरूलाई सम्भव पनि छैन । मनोरञ्जनका नयाँनयाँ अवसरहरू प्राप्त छन् । फागुमा ढ्याङ्ग्रो बजाउनुभन्दा मोबाइलमा श्रव्यदृश्य हेर्न र सुन्न सस्तो र अब्बल भैसक्यो । ठूलालाई सम्मान गर्ने, सानालाई माया गर्ने, खेल्ने, मनोरञ्जन गर्ने, भेटघाट गरेर ताजगी (रिफ्रेस) हुने, मीठो खाने,राम्रो लगाउने माजिक आवश्यकतालाई उत्कर्ष(क्लाइमेक्स) मा पु¥याउने कार्य पुराना चाडपर्वले गरिरहेका छन् । पुराना चाडपर्वका यी पक्षहरू अहिले पनि समाजोपयोगी छन् ।हामी आज वर्गसमाजमा छौँ ।
धनी, राजकीय पदवाला र ठूला नेताहरूका लागि, मन्त्री र धनाढ्यका लागि सधैँभरि दसैँ छ । उनीहरू अजीर्ण हुने गरी खाएको पचाउन जिम हाउस धाउँदै होलान् । तर चाडपर्व गरिबका लागि पीडा र आतङ्क बनेर आउनेछैन । ठूलाबडाले खाएको, लाएको हेरेर हजारौँ गरिबका लालाबाला टुलुटुलु हेर्दै, थुक निल्दै होलान् । भुन्टेभुन्टीलाई एक छाक मीठोमसिनो खान दिन नसकेर कति आमाहरू पछ्यौरीले मुख छोपेर रुँदै होलान् । दसैँतिहारको रमझम र शुभकामना, हर्ष बढाइँ त हुनेखानेको संमी कसैको’ शिक्षक भानु उपाध्यायको सन्देश मर्मस्पर्शी लाग्छ । यहाँ कवि आहुतीको कवितांश स्मरणयोग्य छ –
‘तिमी छाप्रोमा हुर्किएका छौ÷हुर्किनेछौ धुलोमा म तिमीलाई बल गरेर दसैँमा मासु ख्वाउन खोजौँला बिरामी पर्दा औषधि ख्वाउन सके म आफूलाई धन्य ठान्नेछु म सकेको गरौँला तिमीलाई मेरो नानी । तर आमाको काखमा बसेर÷ताली ठोकेर ‘बुबुमाम सुपु्रक्क’ भनेर मेरो यो गरिबीले चाउरिएको मुटुमा नघोच तिमीले ताली बजाउँदा यो छाप्रोको खिल्ली उडाएझैँ लाग्छ यो झूटो गीत÷धौले घरको गीत÷अघाएकाहरूको गीत किन गाउनु हामी भोकाएकाहरूले ?
किन गाउनु हामी गरिबहरूले ?’ दसैँ, तिहार, छठ आदिका अवसरमा गरिबहरूको थाप्लोमा ऋणको भारी थपिनेछ । दसैँको ऋण तिर्न वर्षभरि जोतिनु पर्नेछ । समयमा ऋण तिर्न नसक्दा साहूको हृदय चिर्ने वचन सुन्नु, अपमानित हुनुपर्नेछ ।
अब भन्नुस्– यो दसैँ हो कि दशा ! दसैँ त धनाढ्य, सुदखोर र व्यापारीको आँगनमा मात्र आउने गर्छ । सरकारले विपन्न वर्गका लागि निम्नतम मूल्यमा खाद्य पदार्थ दिँदैन । अनुदान कटौती नगरे ऋण नदिने विश्व बैङ्क नामको सुदखोरको पाउमा लम्पसार परेको हुन्छ सरकार । मान्छे मङ्गलग्रहतिर दौडादौड गरिरहेको आजको युगमा हामी भने खाद्य पदार्थमा अनुदान दिएर मूल्य घटाऊ भनेर नेपाल बन्दरूपीदबाबअस्त्र प्रयोग गर्छौं । दलित, सुकुमबासी, सडके मान्छे, बेरोजगारका लागि हामी अनुदानमा खान देऊ ‘प्रभु’ भनेर हात जोडिरहेका छौँ । सरकार भने सांसदको तलब बढाउँछ । बाहन सुविधा थप्छ ।उपचारको बहानामा राज्य ढुकुटी बाँड्छ । खाद्य सुरक्षा नीति घोषणा गर भन्नेलाई विकासविरोधी,रूढिवादी भन्छ । लुटेराहरूले लुटेको दसैँ राक्षस बनेर आउँदैछ ।दसैँ आइसकेको छ । यसका विषयमा अनेक कोणबाट चर्चा भएका छन् । समयसमयका शासकले आयामहरू थप्दै गएका छन् ।
त्यस विषयमा संस्कृतिकर्मी डीआर पोखरेल भन्छन्–‘शिव, विष्णु र ब्रह्मा वैदिक देवता होइनन् । पहिले आईश्वर देवता थिए । वास्तविक वैदिक देवता इन्द्र, सोम, अग्नि, आदित्य आज अवैदिक स्मार्त देवता (ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर) को अगाडि ओझेलमा परेका छन् । यस्तैगरी अनार्य जातिका गणचिन्हहरू– वरपीपल, तुलसी, बेल आज आर्य जातिका पूजनीय वस्तु बनेका छन् । आफ्नै गणचिह्न बोकोलाई खस जातिले काटेर खानु र राईहरूले नछुनु तथा किराँतहरूले आफ्नो गणचिह्न कीर (सुँगुर) काटेर खानु तर खसहरूले नछुनु कम आश्चर्यको कुरा छैन । दीपावलीमा एकातिर विष्णुकी श्रीमतीको पूजा हुन्छ भने सँगै विष्णुद्वारा अपदस्थ गरिएका दानी दैत्यराज–बलिको पनि पूजा हुन्छ ।’ त्यत्ति मात्र होइन, पछिल्लो अवधिमा राम–रावण युद्धलाई पनि दसैँ पर्वसँग जोड्ने गरिएको छ । अबध साम्राज्यका राजा राम र श्रीलङ्काका सम्राट् रावणका बीचमा भएको युद्धमा हामी आमश्रमिक, गरिब समुदायले दुःखी वा खुसी हुनुपर्ने कुनै कारण छैन ।
पुरानो संस्कृतिको स्रोत निजी उत्पादन सम्बन्धमा आधारित छ । जनविरोधी संस्कृतिको अन्त्य र नयाँ संस्कृति निर्माणका लागि नयाँ उत्पादन सम्बन्ध आवश्यक हुन्छ । अथवा नयाँ संस्कृति स्थापित हुन सामाजिक आवश्यकता र सत्ताद्वारा समर्थन दुवै हुनुपर्छ । अन्यथा पुरानै संस्कृति चलिरहन्छ । किनकि सत्तारूढ वर्गको संस्कृति नै समकालीन समाजको सत्तारूढ संस्कृति हुन्छ । पुराना चाडपर्वमा अरूलाई देखाउन, लोकलाज छोप्नका लागि गरिने आडम्बर यथावत् छ । त्यसमा व्यापरिक स्वार्थ थपिएको छ ।
शरीरलाई फाइदा नभए पनि मासु थुपार, दारुपानीको खोलो बगाऊ किनकि व्यापारीलाई फाइदा हुन्छ । ठूलाबडाको फूर्तिफार्ती बढ्छ । सञ्चारमा ठूलो लगानी गरेर प्रचारयुद्ध चलाइन्छ । विभ्रम खडा गरिन्छ । मान्छेका इच्छाहरू बदल्न, नियन्त्रित गर्न सकिन्छ । त्यसैले सामन्ती र पुँजीवादी संस्कृतिको नमीठो दुर्गन्ध बनेर चाडपर्व हाम्रो बीचमा आएका छन् । कतिपयले जनवादी ढङ्गले पुराना चाडपर्व मनाउने कुरा गर्छन् । हरेक कुरा जनवादीकरण वा प्रगतिशीलीकरण हुँदैनन् ।त्यसो हुन्थ्यो भने ज्ञानेन्द्र शाहको जन्मोत्सव पनि जनवादीकरण गर्न सकिन्थ्यो ।